उत्तर प्रदेशमा घोडामा घातक रोग देखिएपछि सुइ लगाएर मारियो, मानिसमा फैलिने खतरा - हाम्रो देश
उत्तर प्रदेशमा घोडामा घातक रोग देखिएपछि सुइ लगाएर मारियो, मानिसमा फैलिने खतरा
काठमाडौं। नेपालको सीमा नजिकै उत्तर प्रदेशको गो’ण्डा जिल्लामा घोडामा प्रा’ण’घा’त’क रो’ग देखिएपनि अर्को चि’न्ता थपिएको छ । घोडामा ब’रखो’डिया मे’लिलाई नामको प्रा’ण’घा’त’क ब्या’क्टे’रि’या भेटिएको भा’रतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
हि’सा’र ल्या’ब’मा भएको परीक्षणमा घोडाको ग्ला’ण्ड’र्स रिपोर्ट पोजेटिभ आएसँगै घोडालाई सु’ई लगाएर मा’रि’एको छ ।घोडालाई मा’र्न गएका स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीहरुले पी’पी’इ कि’ट लगाएर घोडालाई सु’ई लगाएर मा’रे’का थिए । यो ब्या’क्टेरि’या मा’निसमा समेत फै’लि’ने जो’खि’म भएकोले पी’पी’इ कि’ट लगाएर घोडालाई मा’रिएको हो ।
घोडालाई पी’डा नहुने गरी सु’ई लगाएर मा’रे’र खा’ल्डो’मा गा’डि’ए’को छ । मुख्य पशु चि’कि’त्सा अधिकारी डा. आरएस रा’ठो’रले बताएअनुसार यो प्रा’ण’घा’तक रो’ग घोडा र ख’च्च’र’मा हुन्छ र यो प’शुबाट मानिसमा फै’लिन सक्छ ।डा. राठोरका अनुसार यो रो’ग’को कुनै उपचार छैन त्यसैले ग्ला’ण्डर्’स पो’जेटिभ घोडालाई शुक्रबार सु’ई लगाएर पी’डा’रहित मृ’त्यु दिएर गा’डिएको हो ।
गो’ण्डा’का मुख्य प’शु चि’कित्सा अधिकारीका अनुसार यो रो’ग जे’ने’टि’क अर्थात आ’नु’वं’शिक हो त्यसैले लगातार यसको नि’ग’रा’नी गरिन्छ । यसको कुनै उपचार छेन र यो रो’ग मानिसमा फै’लि’यो भने बाँ’च्ने उ’पा’य छैन त्यसैले घोडालाई मा’र्नु नै यसको एकमात्र उ’पाय हो ।